warkii.com » Askari ka tirsan ilaalada wasiir oo dilay agaasime ka tirsanaa DF iyo sababta
Askari ka tirsan ilaalada wasiir oo dilay agaasime ka tirsanaa DF iyo sababta
Muqdisho (warkii.com) – Askari ka tirsan ilaalada wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa caawa wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho ku dilay masuul ka tirsanaa xaafiiska xeer ilaalinta Qaranka.
Marxuumka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdulqaadir Cilmi, waxaana la sheegay in uu Agaasimihii ka ahaa waaxda IT-da ee xafiska xeer illaalinta Qaranka.
Xeer ilaaliyaha Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo war kasoo saaray dilka masuulkas ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen askarigii dilay marxuumka, isla markaana ay baaritaano ku socdaan.
Sidoo kale Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa tacsi u diray qoyska iyo ehellada uu ka baxay Allaha u naxariistee Maxamed Cabdulqaadir oo ka tirsanaa xaafiiska xeer ilaalinta.
“Waxaan la wadaagayaa qoyska, ehelada iyo shaqaalaha xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, tacsi tiiraanyo leh geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Maxamed Cabdulqaadir Cilmi oo gacan ka xaqdaran ku dishay maantay magaalada Muqdisho,” ayuu yiri xeer ilaaliga Qaranka Suleymaan.
“Marxuumku wuxuu kamid ahaa hawladeenada Xafiiska, wuxuuna ahaa shaqsi firfircoon oo karti iyo howl karnimo ku sifoobay. Waxaa la xiray gacan ku dhiiglihii dilay marxuuka, waxaana socota baaritaan” ayuu qoraalkiisa sii raaciyey.
Dilka marxuumkaas ayaa ka dhacay agagaarka isgoyka Xaaji-Baasto, waxaana la sheegay in markii askarigan ka tirsan ilaalada wasiirka cadaaladda uu dilka geysanayey uu wasiirku saarnaa gaariga, isla markaana istaafkiisu ay ka shakiyeen gaari uu watay marxuumka la dilay, sidaasna ay xabado ugu fureen.